> Resource> iPod> Nyefee iPod Playlist ka Computer Mfe
Gịnị mere ị chọrọ nyefee iPod playlist na kọmputa?
Ò nwetụla mgbe ị okosobode ọ bụla nke na-esonụ ọnọdụ ebe ị chọrọ ịkwaga iPod playlist na kọmputa?
Ị nwere kọmputa okuku, kọmputa virus ma ọ bụ a ike mbanye ọdịda. Mgbe reinstalling, ị chọpụtara na niile listi ọkpụkpọ na kọmputa gị furu.
Ị zụrụ a ọhụrụ kọmputa na mgbe ahụ ghọtara niile music, gụnyere songs si ọtụtụ CD, a tọrọ atọ na gị iPod.
Ị ditched gị ochie iPod maka onye ọhụrụ. Ị ka chọrọ nkwado ndabere na mpaghara faịlụ niile, karịsịa playlist on gị ochie iPod na kọmputa.
Ị na-azọpụta ọtụtụ ụtọ-sounding listi ọkpụkpọ na gị iPod, otú ị chọrọ iṅomi iPod playlist na kọmputa maka òkè.
Ọ bụ a ogwu nsogbu nyefee iPod playlist ọhụrụ kọmputa n'ihi na Apple adịghị akwado ị na-eme ya. Dabara nke ọma, ị ka nwere ike na-atụgharị iPod ka PC transfer maka enyemaka. Ebe a bụ nri otu maka gị. Ọ bụ Wondershare TunesGo. Na ya, ị na-enwe ike nyefee playlist na gị iPod azụ PC ozugbo. E wezụga playlist, ị nwere ike nyefee music, videos, foto, na kọntaktị na SMS dị ka mma.
Nyefee iPod playlist ka PC na 2 nzọụkwụ
The nduzi n'okpuru na-agwa gị otú nyefee playlist na gị iPod azụ PC. Ugbu a download free ikpe version nke a ngwa na kọmputa gị. Wee soro ndu.
Nzọụkwụ 1. ẹkedori iPod ka PC transfer
Nke mbụ niile, ẹkedori a iPod na kọmputa transfer na kọmputa gị mgbe na nbudata na wụnye ya. Jikọọ gị iPod gị na kọmputa site na iji eriri USB. Mgbe ahụ, a usoro amalite ịchọpụta gị iPod na mgbe ahụ na-egosiputa faịlụ niile na gị iPod-ekpe kọlụm nke bụ isi window.
Nzọụkwụ 2. Save iPod playlist na kọmputa
Na ekpe kọlụm, ị kwesịrị ị na pịa "Playlist". Mgbe niile listi ọkpụkpọ na gị iPod ga-emere na nri ebi ndụ. Họrọ listi ọkpụkpọ na ị nwaa mbupụ gị na kọmputa. Pịa "Export ka". Mgbe faịlụ nchọgharị window Pop elu, ị kwesịrị ịhọrọ a ụlọ ahịa ụzọ ịzọpụta exported listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ, a iPod na kọmputa transfer amalite-enyere gị aka bupu playlist. Cheta bụghị ịkwụpụ gị iPod.
Cheta na: Wondershare TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile iPods, gụnyere iPod aka na iOS 9/8/7/6/5, iPod ịkpọgharịa, iPod nano na iPod kpochapụwo. Pịa Tech Spec nke TunesGo Iji nweta ihe ọmụma banyere akwado iPods.